Soomaliya Dan ma utahay dhex-dhexaadninada Khilaafka Masar iyo Itoobiya? – Banaadir Times
Soomaliya Dan ma utahay dhex-dhexaadninada Khilaafka Masar iyo Itoobiya?
By banaadir 24th March 2020 112
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Itoobiya, Gedu Andargachew, ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta “The Reporter” ku sheegay in aysan dhag jalaq u siineynin cambaareynta ka timid Jaamacadda Carabta, ayna u arkaan inay garab taagan yihiin Masar.
“Wada xiriir dhinaca warqadaha ah oo na dhex maray waxay ku sheegeen in qaraarka Jaamacadda Carabta uusan ahayn mid ka turjimaya xal u helista dhibaatada balse uu uga sii darayo xaaladda,” ayuu yiri Gedu.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray: “Waxay noo sheegeen in dhibaatada aan lagu xallin karin qaabkaas, waxaana aaminsan nahay in dalalka kale ee xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta ay raaci doonaan waddadaas”.
Xukuumadda Addis Ababa ayaa dooneyso inay buuxiso biyo xireenka marka la gaaro bisha June ee sanadkan, balse dalka Masar oo ku tiirsan biyaha wabiga ayaa walaac ka muujisay dhismaha biyo xireenkaas, waxayna mas’uuliyiinta dalkaas sheegeen inay tallaabadan saameyn karto qulqulka biyaha Wabiga.
Dunida oo Faaido ka heshay Corono-Virus
Ciidamada Liyuu Boolis oo dhaawacay Maareeyaha maamulka ee degmada Tog-wajaale